११ सय बढ्यो सुनको भाउ
५ असोज २०७७, सोमवार
वैधृति बभ विशाखा , विश्व शान्ति दिवस / विश्व अल्जाइमर्स दिवस
बिहानको ०२ : १०
nepalnews.com . २ महीना अघि
सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य बिहीबार फेरि १ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको हो। यो सँगै सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला १ ल...
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, छैनन् किन्ने ग्राहक
काठमाडौं, साउन २१ : सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै गइरहेका बेला नेपाली बजारमा भने विक्री प्रायः ठप्प छ। चाड पर्व नजिकिँदा बजारमा सुनको माग ह्वात्तै बढ्ने गर्दथ्यो। तर, यो वर्ष भने सुनको विक...
किन बढ्छ सुनको भाउ ? दुई दिनमै २७ सयले बढ्यो
kendrabindu.com . २ महीना अघि
किन बढ्छ सुनको भाउ ? दुई दिनमै २७ सयले बढ्यो २२ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:०६ केन्द्रबिन्दु संवाददाता काठमाडौं । लकडाउन खुलेपछि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउले विहिबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । ...
सुनको भाउ एक लाख दुई हजार पाँच सय पुग्यो
onlinekhabar.com . २ महीना अघि
२२ साउन, काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ११ सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउँमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि सुनको कारोबार प्रतोतोला मूल्य एक ...
सुनको मूल्यले एक लाख नाघ्यो
karobardaily.com . २ महीना अघि
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । एकै दिन तोलामा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेर तोलामा १ लाख नाघेपछि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । मंगलबार प्रतितोला ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको स...
सुन प्रतितोला ११ सयले बढ्यो
nepallive.com . २ महीना अघि
काठमाडाैं- सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य बिहीबार फेरि १ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको हो। याेसँगै सुनकाे मूल्य बिहीबार प...
सुनको मूल्यमा आज पुनः रेकर्ड, तोलाको एक लाख दुई हजार ५००
काठमाडौं- दुई साताभन्दा बढी समयदेखि रेकर्ड कायम भइरहेको सुनको मूल्य आज पुनः बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज (बिहीबार) छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख दुई हजार ५०० पुगेको छ...
सुनको मूल्य तोलाको १ लाख २ हजार ५ सय, चाँदी ५० रुपैयाँले महँगियो
baahrakhari.com . २ महीना अघि
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलाको एक लाख दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाली बजारमा बुधबार लाख रुपैयाँ नाघेको सुनको भाउ बिहीबार प्रतितोला ११ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महास...
तरकारीको भाउ २ सय ५० प्रतिशतसम्म बढ्यो
जथाभावी मूल्य बढ्दा पनि अनुगमन र कारबाही भएन काठमाडौं । विगत ३ हप्तादेखि काठमाडौंमा हरियो तरकारीको मूल्य अत्यधिक रूपले बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीअनुसार...
काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य आकासियो
काठमाडौंको बजारमा तरकारीको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढेको छ । भान्सामा दिनहुँ प्रयोग हुने तरकारीको मूल्य थोक बजार कालिमाटीमा नै किन्नै नसकिने गरी आकासिएको छ । खुद्रा पसलमा मूल्य अचाक्ली भएपछि कालिमा...
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो ?
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्यो ? २२ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:५५ केन्द्रबिन्दु संवाददाता काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आज प्रतितोला ११ सयले बढ...